News - Sidee loo ilaaliyaa madaxa daabacaha si macquul ah?
Maaddaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee mashiinka daabacaadda inkjet, xasilloonida madaxa daabacadu waxay si aan toos ahayn u go'aamisaa tayada mashiinka. Marka qiimaha go'an ee madaxa daabacadu uu yahay mid aad u sarreeya, sida loo dheereeyo nolosha adeegga madaxa daabacaadda, loo yareeyo kharashka beddelka iyo heerka duugga, loona ilaaliyo madaxa daabacaadda si habboon. Waxay muhiim u tahay dukaamada xayeysiinta iyo hawlwadeenada ka shaqeeya! Qof kastaa kuma cusba inuu madax daabaco.
Maaddaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee mashiinka daabacaadda inkjet, xasilloonida madaxa daabacadu waxay si aan toos ahayn u go'aamisaa tayada mashiinka. Marka qiimaha go'an ee madaxa daabacadu uu aad u sarreeyo, sida loo dheereeyo nolosha adeegga madaxa daabacaadda, loo yareeyo kharashka beddelka iyo heerka duugga, Dayactirka macquulka ah ee mashiinka daabacaadda inkjet waa mid aad muhiim ugu ah dukaamada xayeysiinta iyo hawlwadeennada ka shaqeynaya!
Khad mashiinka daabacaadda inkjet
Ink iyo biiyaha waa labada arrimood ee muhiimka u ah daabacaadda caadiga ah ee mashiinka daabacaadda inkjet iyo soosaarka xasilloon ee sawirka. Labaduba way is dhexgalaan oo lamahuraan lagama maarmaan. Sidaa darteed, si loogu xakameeyo mashiinka ugu fiican gobolka daabacaadda, waxaa jira shuruudo gaar ah oo loogu talagalay tayada khadadka iyo habka hawlgalka ee mashiinka daabacaadda inkjet.
1. Mamnuuca isku darka: Waxaa jira noocyo badan oo khad ah oo suuqa yaala, iskudarka walxaha qarxa ee ay soo saarto shirkad walbana waa ka duwan yahay. Isku darka noocyada kala geddisan iyo dufcaddu waxay u nugul yihiin falcelinta kiimikada, taas oo sababi karta midabka midabka iyo midabka oo luma, waxayna sababi kartaa roobab inay xirto sanka, Sidaas darteed waa mamnuuc in la isku daro miisaska gudaha iyo dibadda iyo xirmooyinka noocyada kala duwan.
2.U adeegso tayada liidata si taxaddar leh: Khadka liita ee aan heerkiisu gaadhsiisnayn heerka ku-habboonaanta iyo soo-celinta, taas oo saamayn doonta saamaynta sawir ee ugu dambeeya iyo soo gudbinta dalabka. Qaybaha waaweyn ee midabku si fudud ayey u gubi karaan mashiinka waxayna sababi karaan da 'iyo cunid joogto ah, markaa ha damcin raqiiska khadadka liita, Maxaa yeelay luminta yar uma qalanto luminta.
3.Choose asalka: Waxaa ugu wanaagsan in la doorto asalka asalka ah ee soo saaraha mishiinka daabacaadda inkjet, kaas oo asal ahaan lagu tijaabiyo tijaabooyin iyo adeegsi muddo dheer ah. Waxay ku habboon tahay madaxa daabacaadda ee mashiinka daabacaadda inkjet waana mid deggan oo lagu kalsoonaan karo. Soo-saaruhu wuxuu bixiyaa dammaanad-iibsi muddada-dheer ah. Waa xulashada ugufiican ee khadadka mashiinka daabacaadda inkjet.
Hawlgalka mashiinka daabacaadda Inkjet
Xiritaanka iyo xiritaanka: Kadib markaad dhameyso shaqada mashiinka daabacaadda inkjet, hubi in madaxa daabacaadda iyo xargaha khadku ay si adag isugu dhafan yihiin si ay u go'doomiyaan hawada oo ay si buuxda u qoyaan madaxa daabacaada si looga hortago inuu ku xirmo madaxa daabacaadda.
2.Power-off Protection: Kahor intaadan bedelin qaybaha ama aad dayactir ku sameynin mashiinka daabacaadda inkjet, xusuusnow in mashiinka daabacaadda inkjet-ka ay qasab tahay inuu shaqeynayo. Ha rakibin ama ha kala qaadin sidaad rabto.
3.Ka saarida walxaha shisheeye: Marka laga reebo waxyaabaha warqadaha cuna, waa mamnuuc in walxaha kale ee ajnabiga ah la dul dhigo madbacada mashiinka daabacaadda inkjet, taas oo dhaawac u geysan doonta sanka inta lagu gudajiro dhaqdhaqaaqa.
4. Kahortaga korantada ma guurtada ah: Ku kaydi alaabada la isticmaalo si macquul ah si looga fogaado khilaaf iyo dhalinta korantada. Mashiinka waa inuu ku xirnaadaa dhulka inta aan la isticmaalin, iyo galoofyada difaaca waa in la xidho marka la taabanayo sanka.
5.Maintenance: Haddii madaxa daabacu jabo, marka hore ogaada darnaantiisa, ka dibna isticmaal habka u dhigma si aad u xalliso. Si tartiib ah u samee inta lagu jiro hawsha nadiifinta. Ha ku qasbin cirbadda inay dhaawac joogto ah u geysato madaxa daabacaada.
Deegaanka mashiinka daabacaha
1.Temperature iyo huurka: fiiro gaar ah u yeelo heerkulka iyo huurka hareeraha mashiinka daabacaadda inkjet. Heerkulku waa 15-30 digrii, qoyaankuna wuxuu u dhexeeyaa 40% -60%. Haddii deegaanku aanu buuxin shuruudaha, waad habeyn kartaa hawo qaboojiyeyaasha, qoyaanka qoyaanka, timo qalajiyaha iyo qalab kale Hagaajinta deegaanka shaqada.
Xasiloonida xawaaraha: Kala duwanaanta aqoon isweydaarsiyada qalabka baaxadda weyn, waxaa lagu talinayaa in la habeeyo xasiliyaha awoodda korantada sare leh si loo hubiyo soosaarka danab deggan inta lagu jiro shaqada mashiinka daabacaadda inkjet, si mashiinka daabacaadda inkjet u noqon karo soo saaray oo laga baaraandegay si deggan.
3.Waxay yareeyaan boodhka: Xilliga dayrta, cimiladu waa mid qalalan, dabayl iyo roob yar, taas oo si fudud u sababi karta dabayl, ciid iyo boodh. Hawo-ku-haynta gudaha ma wanaagsana. Boorku wuxuu galayaa godka godka, guddiga iyo qaybo ka mid ah daabacaadaha, taasoo sababa faragelin koronto oo joogto ah iyo xirida biiyaha. Sidaa darteed, qaado tallaabooyinka ku habboon. Tallaabooyinka difaaca ayaa aad muhiim u ah.
Shirkadda Yinghe waxay siisaa noocyo kala duwan oo ah madaxa Daabacaha la soo dhoofiyo, sida Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar, iwm, iyada oo leh hubin tayo leh, 100% alaab cusub oo la soo dejiyo, iyo tiro badan oo qiimo dhimis ah.